Imisebenzi emitsha: Iimodyuli eziNinzi zokuGuqulwa kokuSebenzisa iiModyuli kwiNdawo enye | Martech Zone
Kule minyaka yedijithali, idabi lokuthengisa indawo litshintshile kwi-intanethi. Ngabantu abaninzi kwi-Intanethi, imirhumo kunye neentengiso zisukile kwindawo yazo yemveli zaya kwidijithali yazo entsha. Iiwebhusayithi kufuneka zikwimidlalo yazo efanelekileyo kwaye zithathele ingqalelo uyilo lwesiza kunye namava omsebenzisi. Ngenxa yoko, iiwebhusayithi zibaluleke kakhulu kwiingeniso zenkampani.
Ngenxa yale meko, kulula ukubona ukuba kanjani Ukuguqulwa kwenqanaba lokuguqula, okanye i-CRO njengoko yaziwa njalo, ibe sisixhobo esibalulekileyo kuyo nayiphi na iarhente yomthengisi wetekhnoloji. I-CRO inokwenza okanye iphule ubukho bokuthengisa kwi-Intanethi kunye nesicwangciso.
Izixhobo ezininzi zeCRO ziyafumaneka kwintengiso. Ingxaki, nangona kunjalo, kukuba i-CRO ayisasebenzi. Indaleko kwitekhnoloji ayiboniswanga ngendlela esenza ngayo inqanaba lokuguqula ubungakanani.
Ukulungiswa kwenqanaba lokuguqula ngumsebenzi onzima. Nantsi imeko eqhelekileyo:
Umthengisi kuqala kufuneka alayishe iphepha ngesixhobo. Unekofu kwaye ujonga iiposi zakhe njengoko iphepha lilayisha. Emva koko, iqala ukwenza utshintsho kwiphepha. Kwaye ke kufuneka athathe uncedo lweqela lakhe lobuchwephesha ukuze enze utshintsho kwiwebhusayithi yakhe. Kwaye emva koko, wenza iimvavanyo zokujonga ukuba ngaba zonke izinto ezikweli phepha zibekelwe bona. Ukuba akunjalo, uqala kwakhona, ekunene ekulayisheni iphepha, kwaye abe nenye ikofu. Ukuyibeka ngokungathandabuzekiyo, usabambekile kwisiqhelo esasilandelwa xa ukwenziwa kwewebhusayithi kwakwaziswa- kwaye nathi sonke kunjalo. Akuzange kubekho nto intsha ebonakalayo kwiCRO, ngokungaqhelekanga ngokwaneleyo.
Nangona kunjalo, iFreshworks inempendulo. Freshmarketer (Ngaphambili iZarget) yasekwa ngo-2015 ukuzisa izinto ezintsha kushishino olungakhange lubone nkqubela phambili ibalulekileyo kwiminyaka kunye nokwaphula ukuxhomekeka kwabathengisi kubaphuhlisi bokulungiselela kunye nokuqhuba iimvavanyo ezazikho ngaphambili.
Iinkampani ezijonge ukuphucula amaxabiso okuguqula indawo yazo bekusoloko kufuneka zixhomekeke kuluhlu lweemodyuli ezahlukeneyo ukufezekisa iinjongo zazo, kwaye zithenge iimveliso ezininzi zesoftware ngephulo elinye-Into e-Freshmarketer ifuna ukujongana nokunikezela ngeemodyuli ezininzi zokwenza imveliso kwisoftware enye. , ngaloo ndlela kususwe isidingo sokujonga ngakumbi ukugqibezela inkqubo.
Ngamanye amagama, ukwenziwa kokuphela kokuphela ngoku kunokwenzeka, kusetyenziswa imveliso enye yesoftware- ebizwa ngokuba yi Indawo yeCRO. Iqela le-Freshmarketer lithanda ukucinga ngoguqulelo njengenkqubo yokujikeleza endaweni yomgaqo, apho idatha evela kwiiwebhusayithi ibonelela ngolwazi, olisebenzisayo ukwakha ii-hypotheses, ozisebenzisayo njengesiseko sokwenza ngcono, ethi yona ibonelele ngedatha- kunye nemijikelo elandelayo yomjikelo uyalandela.
Isisombululo esahlukileyo se-Freshmarketer silele kwiplagi yaso yeChannel, nakwindawo yayo yokuguqula into inye. Iplagi yayo yokuqala yeChannel yenze ukuba kube lula kakhulu ukuvavanya nokwandisa amaphepha okuphuma, awayekade engavumelekanga. Izixhobo zokwenza ngokwesiko zazilinganiselwe kuba zazifuna ukuba abasebenzisi balayishe amaphepha abo kwenye indawo. Oku kubeka umngcipheko kwezokhuseleko kwaye kukwathetha ukuba ezi zixhobo zinomda omkhulu kwizinto abanokuzenza. Nangona kunjalo, iqela likaFreshmarketer lidlulile kuyo yonke le mida. Indawo yayo yokuguqula into inye ibandakanya i-Heatmaps, Uvavanyo lwe-A / B, kunye noHlolo lweFanele kunye.
Nazi izinto ezipholileyo onokuzenza ngeFreshmarketer:
Lungiselela kwaye uvavanye amaphepha kanye kwisikhangeli sakho, nge Iplagi yeChannelmarketer entsha yeChannelmarketer.
Jonga iingxelo zedata ephilayo -Ukuqonda malunga nokuba kwenzeka nini unxibelelwano. Azisekho izifinyezo.
Sebenzisa amandla amaninzi Iimodyuli zeCRO ngemveliso enye nje.
Landa umkhondo kwizinto ezisebenzayo zewebhusayithi.
Yenza ngokwezifiso ii-URL ngokulula, ngoncedo oluncinci kwiqela lakho lobuchwephesha.
fumana izisombululo ezihlanganisiweyo xa uqhuba iimodyuli ezizodwa. Ukubandakanya uvavanyo lwe-A / B ngeemephu zobushushu ezakhelweyo.
Inkqubo yomjikelo wokucetyiswa kokunyanzeliswa kwe-Freshmarketer iqala ngohlalutyo lwefaneli. Uhlalutyo lwefaneli kulapho iseti yamaphepha asebenza njengendlela yokuguqula kuvavanywa ukubona apho iindwendwe ziyehla khona kwi-faneli. Oku kunceda uyazi ukuba iindwendwe zinxibelelana njani nomxholo omkhulu wokuguqulwa.
Okulandelayo, qhubela phambili usebenzisa iimephu zobushushu, ezidityaniswe nohlalutyo lwefaneli. Ubushushu beemephu yimizobo ebonisa idatha eqokelelweyo enamaphepha. Zikubonisa izinto zewebhusayithi ezisebenza kakubi, kwaye ngawaphi amalungu esiza sakho afuna ukulungiswa. Emva kokufunda apho bayayeka, uyafunda ngoba bayayeka.
Nje ukuba uchonge izinto zakho ezibuthathaka kunye namaphepha, emva koko ungaya kwinqanaba lokugqibela- kuvavanyo lwe-A / B. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba uqale uvavanyo lwe-A / B, kungcono ukuba wenze ii-hypotheses eziqinileyo zokuvavanya. Iingcinga zovavanyo lwe-A / B kufuneka lusekwe kulwazi oluvela kuvavanyo lwakho lwangaphambili. Uvavanyo lwe-A / B kulapho utshintsho lwenziwe khona kwiphepha, kwaye ligcinwe njengomahluko. Ukundwendwela kwabatyeleli kwahlulwe phakathi kwezi zinto zahlukileyo, kwaye enye ineenguqulelo ezingcono 'eziphumeleleyo'.
Kwaye xa sele ushiye ingxelo engcono yendawo yakho, uqala umjikelo kwakhona!
Sisebenzise i-Freshmarketer kwiphepha lethu lokubhalisa, senza ii-tweaks kuyo ngokusekwe kwii-hypotheses ezenziwe ngedatha eqokelelwe kusetyenziswa i-Freshmarketer, eyonyuse ukusayinwa nge-26% kwiintsuku ezintathu. UShihab Muhammed, iNtloko ye-BU eFreshdesk.
Ngokwezifundo kunye nokuqwalaselwa ziingcali zeshishini, ukuphuculwa kwenqanaba lokuguqula kulungele ukubona ukukhula okukhulu kule minyaka izayo njengoko abathengisi abaninzi nangakumbi bebeka ukubaluleka kwiCRO kwimikhankaso yabo. Ngenxa yokuguquguquka kwayo, ukusebenziseka lula, kunye neempawu ezizodwa, iFreshmarketer ibekwe kakuhle ukuze isebenzise inkqubela phambili ebaleni.
Freshmarketer imele ukutsiba okuvela kwindlela iinkampani ezinokuthi zikulungiselele ngayo ukuguqulwa kwaye zibone nzulu ekusebenzeni kwesiza. Cinga ngenkqubela phambili ecothayo kwicandelo lethu xa kuthelekiswa nomzi mveliso womculo, osuswe ngokukhawuleza ukusuka kwiirekhodi ukuya kwiiCD, kwiiPods, kwaye ekugqibeleni, ukuya kusasazo. Iplagi yethu ye-Chrome linyathelo elilandelayo kwi-CRO kwaye imele ikamva lokuphuculwa kwenqanaba lokuguqula, enkosi kwimizamo yethu yokuyenza ingenamthungo kwaye isebenze ngakumbi ngokudibanisa iimodyuli ezahlukeneyo zokuguqula. Silindele ukwamkelwa okukhawulezayo njengemfuno kunye nohlahlo-lwabiwo mali lokuguqulwa kwenqanaba lokwenyuka kwihlabathi liphela. I-E-commerce kunye ne-SaaS firms ziya kuziqonda kwangoko izibonelelo zokuba nesuti enye ye-real-time mapmap edityaniswe ne-A / B kunye novavanyo lwefaneli.
Zama iFreshmarketer yasimahla
tags: vavanyochrome iplagiukuguqulwa kokusebenzaUkuguqulwa kwenqanaba lokuguqulaikratshiicro suiteindawo entshaimisebenzi emitshaUhlalutyo lwefaneliGoogle chromegoogle chrome iplagiimephu yobushushuimephu yefutheubushushuUbushushuukuxela idatha bukhomaphila iingxelo zedathaUkulungiswaYahlulahlula uvavanyo lwe-URLukulandelela umkhondozarget